LANDA I-AUTOCAD 2019 - UKUBUYEKEZA KOHLELO - 2019
I-AutoCAD iye yaziqhenya ngendawo phakathi kwezinhlelo zokuklama ezibonakalayo iminyaka eminingi. Lokhu, eqinisweni, isofthiwe ehamba phambili kakhulu esetshenziselwa izidingo ezinkulu kakhulu.
Izindawo eziyinhloko zokusetshenziswa kwalolu hlelo zingumklamo wokwakha nezakhiwo nokwakhiwa kwezimboni. Ngosizo lomkhiqizo, awukwazi ukuthuthukisa kuphela imodeli yesithathu, kodwa futhi udwebe imidwebo yayo eningiliziwe. Izinhlangano eziningi zokuklama namahhovisi okuklama zisebenzisa i-AutoCAD njengesistimu eyisisekelo yokudala imidwebo ehlukahlukene, ukwenza amaphrojekthi ngefomethi ejwayelekile yesistimu ye- ".dwg" ibhekisela embonini yokuklama.
Ukuthuthukisa nokuthola izici ezintsha, i-AutoCAD ngenguqulo entsha ngayinye iba lula kakhulu, ivulekile futhi ivulekile ukutadisha. I-AutoCAD ilungele abasebenzisi abafuna ukuthola ikhono lobuchwepheshe. Indawo yasendaweni yaseRashiya kanye nenani elikhulu lamavidiyo wokuqeqesha lizofaka isandla kulokhu. Cabanga ngezici eziyinhloko namakhono.
Bheka futhi: Izinhlelo zohlobo lwe-3D
Ngaphambi kokuqala umsebenzi, ungavula umdwebo owenziwe ngomumo futhi uzijwayele nge-interface. Ezinye izakhi zemidwebo eqedile zingasetshenziselwa umsebenzi oqhubekayo.
Amathuluzi okudweba nokuhlela izimboni ezimbili-ntathu
I-AutoCAD inamathuluzi amaningi futhi asebenzayo wokudweba nesichasiselo, esitholakala kuphrofayela ekhethekile yebhloko. Umsebenzisi angakwazi ukudweba imigqa elula futhi ivaliwe, iziphephelo, ama-arches, izindikimba ze-geometri nokuqeda.
Lolu hlelo lukhona ithuluzi lokukhetha elilula kakhulu. Ukubamba inkinobho yegundane lesokunxele, ungamane ujikeleze izakhi ezidingekayo futhi zizogqanyiswa.
Izakhi ezikhethiwe zingashintshwa, zihanjiswe, ziboniswe, zingabeka umjikelezo futhi zenze izigaba ezihlelekile.
I-AutoCAD inikeza umsebenzi we-parameterization elula. Ngalo, ungabeka ubuhlobo phakathi kwezibalo, isibonelo, zenze zifane. Uma ushintsha isimo sesimo esisodwa, okwesibili kuzophinde kuhambisane ngenkathi igcina ukufana.
Ubukhulu namathekisthi abengezwa kalula emdwebeni. I-AutoCAD inenhlangano ehlelekile yomdwebo. Izendlalelo zingafihlwa, zivinjiwe futhi zihlele izilungiselelo ezizenzakalelayo.
Iphrofayela ye-3D yokufanisa
Imisebenzi ehlobene nokufaniswa kwemithamo ye-volumetric iqoqwe kwiphrofayli ehlukile. Ngokuyisebenzisa, ungadala futhi uhlele imizimba eningi. Lolu hlelo lukuvumela ukuthi udale izimboni ezinkulu futhi uguqule ama-two-dimensional ngokusebenza kwe-lofting, ukukhipha, ukusika, ukuxhumeka, imisebenzi ye-bulleted nabanye. Imingcele yokusebenza idalwa kusetshenziswa ama-prompts namabhokisi ebhokisi. Le algorithm inengqondo, kodwa hhayi enembile ngokwanele.
Ngemodi yesithathu, into ingabelwa isigaba sevolumu ukuze sibone isakhiwo sayo.
I-AutoCAD inethuluzi elinamandla kakhulu ekudaleni izindawo. Izikhonkwane zengxube zingenziwa kusukela emaphethelweni emizimba yejometri, izingxenye noma izingxenye zomugqa. Ukuqhamuka kungadliwa, kuhlanganiswe, kuhanjiswe, nokunye okusetshenziselwa ukusebenza, ukudala i-topology yefomu eyinkimbinkimbi.
Lolu hlelo luhlinzeka ngemisebenzi yokudala izinto zegridi ngokusekelwe ezinhlobonhlobo ezinkulu futhi zisebenzisa ukuguqulwa kweJomethri. Ngakho-ke, izidumbu zenguquko, izakhi zokupheka kanye nezindawo ezingapheli zidalwa.
Phakathi kweminye imisebenzi ewusizo kukhona ukufakwa kwebhande emzimbeni ohlosiwe, ukuhlukaniswa kobuso nama polygoni, ukukhwehlela, ukudala indawo yokuxhuma kanye ne-Koons surface, amathuba okuvala nokuthutha kwendawo.
Ukunikeza izinto ukubukeka okunengqondo, umsebenzisi angasebenzisa umhleli wezinto ezibonakalayo. Ukuze udale isithombe esiyiqiniso, i-AutoCAD inamandla okubeka iphuzu, ukuqondisa noma ukukhanya komhlaba. Umsebenzisi angenza ngezifiso izithunzi namakhamera. Njengoba usethe ubukhulu bomfanekiso wokugcina, kwanele nje ukuqala ukubalwa kwawo.
Yakha imidwebo yezithombe
Incazelo ye-AutoCAD ngeke iphelele ngaphandle kokusho ukuthi kungenzeka ukudala amashidi wemidwebo. Lolu hlelo luhlinzeka ngamathempulethi angaphambi kokulungiswa ngezitembu. Umsebenzisi angakwazi ukwenza ngokwezifiso izakhiwo zemidwebo ngokuhambisana namazinga wokuklama. Ngemva kokudweba imidwebo, zingathunyelwa ku-PDF noma ziphrintiwe.
Ukubuyekezwa kwethu sekuphelile, futhi singaphetha ngokuthi i-AutoCAD ayiyona into ehlala yikhiqiza ethandwa kunazo zonke kumklamo we-virtual. Lokhu kuqondiswa ukusebenza okuthakazelisayo kanye nomqondo oqinile womsebenzi. Ake sifingqa imiphumela.
- Umsebenzi oqinile futhi ubhekise ekudaleni imidwebo
- Ingavula cishe noma yikuphi ukudweba, ngoba ukudweba ku-AutoCAD kuyinhlangano evamile
- It has localization-language localization, usizo oluningiliziwe kanye nesistimu amathiphu ezibukwayo emisebenzini
- Iqoqo elikhulu lemisebenzi ekwakheni nasekuhleleni izimboni ezimbili-dimensional kanye nemizimba yokuzithandela
- Isici sokukhethwa kwesici esikahle
- Ikhono lokudala izibonisi ezibonakalayo
- Isimiso sokusebenza esikuvumela ukuthi udale imidwebo ngokusekelwe ezinhlobonhlobo ezintathu
- Ukutholakala kwamathempulethi okudweba
- I-trial trial ilinganiselwe esikhathini sokuhlola izinsuku ezingu-30.
- I-interface ibonakala ilayishwa ngokweqile, naphezu kwesakhiwo nokuhlukaniswa kube amaphrofayli omsebenzi
- Inqubo engalungile yokuhlela imithombo yokukhanya
- Indlela yokuboniswa ngeso lengqondo ayikho ngempela into
- Ezinye izinto azikwazi ukuzwa intuitiveness.
Landa i-AutoCAD Trial Version
Indlela yokwengeza uhlobo lomugqa ku-AutoCAD Ukufaniswa kwe-3D ku-AutoCAD Indlela yokudlulisa umdwebo kusuka ku-AutoCAD kuya ku-Microsoft Word I-AutoCAD isofthiwe efanayo
I-AutoCAD iyisistimu ye-CAD engcono kakhulu ngamathuluzi afanelekayo kanye nemibhalo ephelele yomsebenzi olula ku-2D ne-3D.
Izindleko: $ 1651